थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न तुलसी खेती, कस्तो छ यसको व्यापार ? - ज्ञानविज्ञान
कम समय र कम लागतमा राम्रो आम्दानीको विकल्पको खोजीमा रहेकाहरुका लागि मेडिसनल प्लान्ट (औषधीय गुण भएका वनस्पति) को खेती तथा व्यापार निकै लाभदायक हुन्छ । यस्ता प्लान्टको खेतीका लागि न त ठूलो फर्मको आवश्यकता पर्छ, न त ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ । यी वनस्पतिहरुको खेती तपाईले लिजमा जमीन लिएर समेत गर्न सक्नुहुन्छ ।
अधिकांश औषधीजन्य वनस्पति ३ देखि ६ महिनाभित्र तयार हुन्छ । यसपछि यी वनस्पतिबाट लगातार आम्दानी हुुन्छ । यदि तपाईले तुलसीको खेती गर्नुहुन्छ भने २० देखि ४० हजारसम्मको लगानीमा तपाईले केबल ३ महिनामा ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
तुलसी हाम्रो घरआँगनमा लगाइने अत्यन्तै गुणी बिरुवा हो। धार्मिक रूपमा पनि यसको निकै मान्यता रहेको पाइन्छ। सँगै यसको व्यवसायिक हिसाबमा पनि धेरै संभाबना छ। जमिन हुनेहरूका लागि निकै सहज हुने र जमिन नहुनेहरूले पनि थोरै जमिन भाडामालिएर खेती गर्न सकिने भएकाले यो खेतीमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुन्छ ।
यसको खेती चैत्र वा वैशाखबाट सुरु गर्न सकिन्छ। सबै मौसममा राम्रो हुने यसको खेती अझ बढी गर्मीमा फस्टाउँछ।
तुलसीको खेती दुई प्रकारबाट गर्न सकिन्छस बीउबाट र हाँगाबाट।
बीउबाट खेती गर्दा तुलसीमा पहिला फूल लाग्न थाल्छन्। त्यसको एक महिना पछि पाक्न सुरु हुन्छ। एउटा फूलमा लगभग १८ बीउ हुन्छ। ती बीउलाई निकालेर सुकाउनुपर्छ। त्यसपछि बिउलाई रङ्गीन बोतलहरुमा भरेर ८-१२ हप्ता सम्म ओस नभएको स्थानमा राख्नुपर्छ।
रोप्दाखेरी १५ से.मि. को दुरीमा ड्याङहरु बनाउनुपर्छ। हरेक ड्याङमा लगभग १०० वटा बीउ रोप्नुपर्छ। रोपेको ८ देखि १० दिन पछि टुसा पलाउन सुरु हुन्छ। आवश्यकता अनुसार सिँचाइ, गोडाइ गरिराख्नुपर्छ। बिरुवाको लम्बाई १० देखि १५ से. मि. भएपछि रोपाइको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१० देखि १५ वटा हाँगा काटेर छाया पर्ने ठाउँमा राखी बिहान बेलुकी पानी दिनुपर्छ। एक महिनापछि हाँगाबाट जराको विकास हुन थाल्छ। त्यसपछि पातहरु विकास हुन्छन्। हाँगाहरु ५ देखि १० से।मि लामो भएपछि रोपाइ गर्न सकिन्छ।
तुलसीको खेतीबाट दुई प्रकारका उत्पादन गर्न सकिन्छ : पहिलो बिउ र दोस्रो पात। यसको बीज उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ साथै यसको पातबाट तेल निकालेर राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ ।
एक हेक्टरमा यसको खेतीका लागि लगभग १० किलोग्राम जति बिउको आवश्यकता पर्छ भने एक हेक्टर क्षत्रफलबाट लगभग १२० देखि १५० किलोग्रामसम्म तुलसीको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
तुलसीको बिउ प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। यस्तै तेलको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १३०० रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
तुलसीको माग बजारमा निकै रहेको पाइन्छ। यसको व्यापार भारत तथा चीनमा निर्यात गरि गर्न सकिन्छ। तुलसीलाई औषधी बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
हामीले तुलसीकाे केहि फाइदाहरू दिइएका छाै
चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौ रोग निको गर्ने क्षमता छ । यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व का छन् । यसले भोक जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचनक्रिया बढाउनुका साथै झाडावान्ता पनि रोक्ने कार्य गर्दछ । मानिस मृत्युशैयामा हुँदा प्राण त्याग्नुअघि तुलसीको बोटसागै राख्नाले तथा तुलसीपत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाउँछ भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ ।
तुलसी रोपेको चारसय मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धले शुद्ध पार्छ भन्ने विश्वास छ| तुलसी, वटवृक्ष वरिपरि र तुलसीको छाया वरिपरि र यसको हावाको परिधिभित्र कुनै पनि विषाक्त कीटाणुहरू टिक्न सक्तैनन् र् दीर्घरोगीहरूसमेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको कुरा वैज्ञानिकहरू पनि बताउछन् ।
बिहानै तुलसीको पूजनले, तुलसीसागको सम्पर्कले मानव जीवन निरोगी बन्छ भने तुलसीको समिश्रणको खाद्यपदार्थहरूको सेवन गर्दा मानिसले दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कथन छ । यहासम्म कि तुलसी एउटा महाऔषधि भएकाले मृत्युका मुखमा परेका बिरामीहरूलाई पनि घाटका चिकित्सकहरूले मुखमा तुलसी राखिदिन प्रेरणा दिन्छन् ।
मृत्युपश्चात् पुनः देह निर्माणको प्रतीकस्वरूप पिण्ड, श्राद्वादि कार्य र दिवङ्गत पितृहरूले आफन्तहरूबाट प्राप्त गर्ने खानाको विश्वास स्वयं दिइएको पिण्डमा तुलसीको मञ्जरी राख्ने गरिन्छ भने देवकार्यमा अर्पण गरिने नैवेद्यहरूमा तुलसी नराख्दा विषाक्त र जूठोरूपमा लिइन्छ । अघिपछि दैनिकी हाम्रा खाद्य पदार्थहरूमा पनि तुलसीको प्रयोग गरी निर्विषाक्त पार्ने प्रयास गरिएको हुन्छ ।
विभिन्न कारणबाट खानाका पदार्थहरू जमीनदेखि नै विषाक्त बनेका हुन्छन् भने तिनको भण्डारणदेखि भान्छासम्म मन, वचन र मानिसको क्रोध, आवेग, तनावका कारण पनि खानेकुराहरू विषाक्त बनिरहेका हुन्छन् । तिनलाई निर्विषाक्त बनाउने एक मात्र सजिलो उपाय तुलसीको प्रयोग पनि हो ।
यसरी हाम्रो जीवनको प्रत्येक क्षणमा तुलसी जीवनसाथी नै बनेको छ । तुलसीले अजीर्ण, अरुचि र उदरशूलजस्ता सामान्य र मुटु, मृगौलाजस्ता असामान्य रोग हरण गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले पनि तुलसी र मानव जीवनमा अन्तरसम्बन्ध बढ्न गएको हो । हालै भारतमा भएको एक परीक्षणबाट तुलसीमा क्यान्सरजस्तो भयङ्कर रोगसाग लड्ने क्षमता भएको कुरा पुष्टिभएको छ ।
यसकाे धार्मिक महत्व पनि छ
युगौ युगदेखि तुलसीको महत्व कायमै छ। सत्ययुगदेखि नै मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको तुलसीलाई त्रेतायुगमा रामको नामले यसलाई ज्ञानको प्रतीक मानियो भने त्रेतायुगमा भक्तिरूपी सीताको अभावमा चित्रकुटमा रामले आफ्नो आसुले तुलसीको सिञ्चन गर्नुभयो। द्वापर युगमा तुलसी सत्यभामाकी जीवन सङ्गनि नै बनिन् ।
कृष्णप्रियासमेत भई गोलोकमा राधिकाको नामले तुलसीलाई पुकारियो। वृन्दावन पूरै तुलसीको वनले ढाकिएको क्षेत्र हो। तुलसी वनलाई नै वृन्दावन भनिन्छ। वृन्दावन पुग्दा मन हषिर्त र आनन्दित हुने कारण तुलसीको वास्ना नै हो। मन हषिर्त र प्रफुल्लित भएपछि नै जीवन धन्य बन्छ र जीवनोपयोगी र सामाजिक मर्यादाअनुकूलको काम सम्पन्न हुनपुग्छ। सुकेको झारको रूपमा समेत उत्तिकै उपयोगी भएको तुलसीको रोपण, पूजन, यजन, चिन्तन र मनन् हर मानवका लागि उपयोग सिद्ध भएको छ ।
Don't Miss it हरियो मकै खानुका फइदाहरू यस्ता छन्
Up Next सातुको नियमित सेवनको अचुक फाईदा यस्ता छन् – यो पढेर तपाई आजैबाट सातु खान थाल्नुहुन्छ